Jumeirah Group dia manendry ny VP isam-paritra vaovao sy ny mpitantana jeneralin'ny Burj Al Arab Jumeirah
Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Jumeirah Group dia manendry ny VP isam-paritra vaovao sy ny mpitantana jeneralin'ny Burj Al Arab Jumeirah
Ermanno Zanini dia hitarika sy hanohana ny ekipa amin'ny fanoloran-tena tsy miovaova mba hamoronana traikefa vahiny tsy hay hadinoina, sady mitazona ny fiambenana ho an'i Italia sy Espana
Ermanno Zanini dia nanendry General Manager vaovao an'ny Burj Al Arab Jumeirah
Ermanno dia niditra tao amin'ny fianakaviana Jumeirah tamin'ny 2019
Amin'ny toerany vaovao, dia hanolotra ny etona faran'izay tsara mihaja ao amin'ny trano fandraisam-bahiny misy endrika izy, izay misy zavatra azo atao miaraka amin'ny ekipa manam-pahaizana aminy.
Vondron Jumeirah dia nanambara ny fanendrena an'i Ermanno Zanini ho andraikitry ny filoha lefitry ny faritra ary mpitantana jeneralin'ny Burj Al Arab Jumeirah, trano fandraisam-bahiny voalohany ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra.
Amin'ny andraikiny vaovao, Ermanno dia hanara-maso ny lafiny rehetra amin'ny hetsiky ny kisary manerantany, miorina amin'ny fiaviany manan-karena mba hampiorina bebe kokoa ny serivisy miavaka izay Burj Al Arab Jumeirah dia malaza amin'ny. Izy no hitarika sy hanohana ny ekipa amin'ny fanoloran-tena tsy miovaova mba hamoronana traikefa tsy hay hadinoina ho an'ny vahiny, ary izy kosa dia mitandrina hatrany an'i Italia sy Espana.
Ermanno dia niditra tao amin'ny fianakavian'i Jumeirah tamin'ny taona 2019 rehefa nampidirina tao amin'ny portfolio Jumeirah Hotels and Resorts ny lapa malaza ao Capri any Italia. Ermanno dia nanohy ny andraikiny amin'ny maha mpitantana jeneraly an'io vatosoa mediteraneanina io ao Anacapri - toerana izay nohazoniny hatramin'ny 2002 - raha mbola nandray andraikitra fanampiny ho an'ny Jumeirah Group ho filoha lefitry ny faritra ho an'i Italia sy Espana. Teratany Naples, Ermanno dia tena globetrotter, manam-pitiavana fatratra ny fahaiza-mahandro sakafo, rehefa nandefa trano fisakafoanana misy kintana maro an'isa Michelin, ao anatin'izany ny trano fisakafoanana sy klioban'ny Il Riccio malaza ary koa ny trano fisakafoanana L'Olivo misy kintana roa, samy hita ao Capri Palace Jumeirah. Izy koa dia mpifaninana zava-kanto sy sary izay mankafy mahita talenta vaovao, ary nandrombaka ny fametrahana ny Zavakanto ankehitriny noho ny trano fandraisam-bahiny mba hamoronana sehatra miavaka. Nandritra ny fotoanany tao amin'ny Capri Palace Jumeirah, Ermanno koa dia namorona toeram-pitsaboana tsy manam-paharoa ao anatin'ny trano, miaraka amin'ny fitsaboana vaskola patantika 'The Leg School', natolotry ny profesora Francesco Canonaco, talen'ny fitsaboana ao amin'ny Capri Beauty Farm.
Anisan'ny anjara asany amin'ny maha RVP ho an'i Italia sy Espana i Ermanno dia nandray anjara tamin'ny famerenana amin'ny laoniny ny vanim-potoana mahavariana ny Jumeirah Port Soller Hotel & Spa any Mallorca, napetraka ao amin'ny tranokalan'ny UNESCO Heritage Heritage. Notendren'i Ermanno i Gianluca Priori ho mpitantana ankapobeny an'io fialamboly clifftop tsara tarehy io, izay mirehareha amin'ny fahitana ny tendrombohitra sy ny ranomasina. Eo koa, ny fitsaboana Talise Spa izay nahazo loka dia nahazo fankasitrahana marobe tamin'ny traikefa nahafinaritra farany.
Fergus Stewart, Lehiben'ny mpiandraikitra misahana ny Jumeirah Group, dia nilaza hoe: "Faly izahay mandray an'i Ermanno Zanini amin'ny anjara asany vaovao amin'ny maha filoha lefitra isam-paritra ary mpitantana jeneralin'ny Burj Al Arab Jumeirah. Amin'ny toerany vaovao dia hamoaka etona faran'izay tsara mihaja ao amin'ny trano fandraisam-bahiny malaza rehetra misy zavatra azo atao miaraka amin'ny ekipa manam-pahaizana aminy, sady miantoka ny fahombiazan'ny asa any Italia sy Espana. ”
Programme flyer tsara indrindra 2021 antsoina hoe
Tian'i UNWTO tsy hahomby ny WTTC: Mexico sy Repoblika Dominikanina lalaovin'i Zurab Pololikashvili